လက်ရေးက ဘာလို့ အရေးကြီးလဲ - Hello Sayarwon
လက်ရေးက ဘာလို့ အရေးကြီးလဲ
Phyo Wai Yan မှ ရေးသားသည်။ 16/08/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အခုလိုနည်းပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ လက်နဲ့စာရေးတာတွေအစား ကွန်ပျူတာနဲ့ စာရိုက်တဲ့နည်းလမ်းကို ပိုမိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ထိုသို့ဖြစ်လာခြင်းဟာ အပြုသဘောဆောင်သလား၊ မဆောင်ဘူးလားဆိုတာ အငြင်းပွားစရာပါပဲ။ လက်နဲ့စာရေးခြင်းရဲ့ အသုံးဝင်မှုတွေကို ဝေခွဲမရဖြစ်လျက်ရှိသော်လည်း ကလေးတွေမှာတော့ သမာရိုးကျလက်နဲ့စာရေးခြင်းနည်းလမ်းက အကျိုးပြုနေပါတယ်။
ကလေးကို ဘာကြောင့် စာရေးတတ်အောင် အရင်သင်ပေးဖို့ လိုတာလဲ။
ကီးဘုတ်အသုံးပြုစာရိုက်ခြင်းနဲ့ ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် လက်နဲ့ရေးတာက ကလေးတွေရဲ့ သိမြင်မှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအတွက် သိသိသာသာကြီး ပိုအကျိုးပြုပါတယ်။
– လက်ချောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေက ကလေးဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေကို လှုံ့ဆော်ပါတယ်။ အမြင်၊လှုပ်ရှားမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘာသာစကားနဲ့ မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းတွေ အဓိကပါဝင်နေပါတယ်။ စာလုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ တွေ့ကြုံစေပြီး ကလေးရဲ့ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်နဲ့စာရေးနည်း မကျင့်ပေးဘူးဆိုရင် စာဖတ်နိုင်စွမ်း၊ သင်ယူနိုင်စွမ်းနဲ့ လူအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းတို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်မှာပါ။
– ၂၀၁၄ခုနှစ် လေ့လာမှုအရ ကလေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို အဆင့်၂ဆင့်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ပထမအဆင့်က ၃နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအဆင့်ကတော့ နောက်ထပ်၄နှစ်အကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးအယောက်၁၀၀၀ကို လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ငယ်ရွယ်အခါက စာရေးနိုင်စွမ်းတွေနဲ့ နောက်ပိုင်း အတန်းပညာရလဒ်တွေကြား ဆက်နွယ်မှုဟာ အပြုသဘောဆောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက ကလေးစာမြန်မြန်ရေးတတ်လေ သေတ္တာဖွင့်ခြင်း၊ ဖိနပ်ကြိုးချည်ခြင်းလိုမျိုး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို မြန်မြန်လုပ်တတ်လေပဲလို့ ဆိုထားပါတယ်။
– ပုံဆွဲခြင်း၊ ဆေးရောင်ခြယ်ခြင်းတို့ကို အားပေးပါ။
ပုံဆွဲတာတွေ၊ ဆေးရောင်ခြယ်တာတွေက စာရေးခြင်းအတတ်ပညာအတွက် အကြိုလေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။ ထိုသို့ပုံမှန်ပြုလုပ်နေခြင်းက လက်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ရင်းနှီးလာစေနိုင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ လက်ချောင်းကြွက်သားတွေကို သန်မာလာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာလုံးလေ့လာမှု စွမ်းရည်ကိုလည်း မြန်ဆန်စေမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးနီုင်စွမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ဖို့ရာ ခဲတံနဲ့ ရောင်စုံတွေအပြင် မာကာ၊ ရောင်ဆုံခဲတံနဲ့ မြေဖြူတို့ကိုလည်း ပေးထားသင့်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကို မိဘတွေ ခဏခဏမေ့တတ်ပါတယ်။ စာလုံးနဲ့ စကားစုတို့သာအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ စာရေးတဲ့အခါ ခဲတံကို ဘယ်လိုကိုင်ရမယ်၊ ဘယ်လိုထိုင်ရမယ်ဆိုတာတွေလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
– စာရေးနည်းသင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကလေးတိုင်းတွေ့ကြုံရမယ့် အခက်အခဲတွေကို သိနေပါစေ။
စာရေးဖို့ စသင်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါတို့ကို ကလေးအများစု ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။
အရွယ်အစားကြီးတဲ့ စာလုံးများ ရေးခြင်း
တိုက်ရိုက်ထိရောက်သော သင်ကြားနည်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာများကို ကျော်လွှားပြီး အချိန်အများကြီးသက်သာစေမှာပါ။
-Handwriting in early childhood education: Current research and future implications. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468798414522825. Accessed December 29, 2016.
-Letter Perfect: Helping Kids Learn to Write. http://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/writing/helping-kids-learn-to-write/. Accessed December 29, 2016.
ကလေးဖွံ့ ဖြိုးစေဖို့ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်း ၄ သွယ်